လှိုင်သာယာ မှ စက်ရုံ အလုပ်သမားများ သင်္ကြန်ပိတ်ရက် ထက်ဝက် လျှော့ချလိုက်ခြင်းအား ဆန္ဒပြ | Open Development Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ၃ – ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးနှင့် သာယာဝပြောရေး
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ငါးမွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်း နှင့် ငါးသားဖောက်လုပ်ငန်း
မြန်မာနိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) စနစ်
မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်းကဏ္ဍ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များမှ နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း
မြေအောက်သယံဇာတထုတ်ယူရေး လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ မူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး
2019 Open Data Day
လှိုင်သာယာ မှ စက်ရုံ အလုပ်သမားများ သင်္ကြန်ပိတ်ရက် ထက်ဝက် လျှော့ချလိုက်ခြင်းအား ဆန္ဒပြ
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ရှိ စက်ရုံပေါင်း ၁၅ရုံမှ အလုပ်သမား၅ဝဝခန့်သည် သင်္ကြန် ပိတ်ရက်ကို ဆယ်ရက်မှ ငါးရက်သို့ လျှော့ချလိုက်သည့် အစိုးရ၏ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် မကျေနပ်သဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ဤအရာနှင့် Open Development Myanmar မှထုတ်လုပ်သော၊ ထုတ်ဝေသော မည့်သည့်အကြောင်းအရာမဆို CC BY-SA 4.0 ၏အောက်တွင်မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ရင်းမြစ်အသီးသီး၏ fair-use နည်းဥပဒေများနှင့် မူပိုင်ခွင့်များအတိုင်း သတင်းဆောင်းပါးများကို ၎င်းတို့၏ ရင်းမြစ်များမှထုတ်ယူထားသည်။ Open Development Myanmar website တွင်တင်ထားသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပူးတွဲပါဝင်သည့် database များသည် အများသူငါ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်သောစာတမ်းများဖြစ်ပြီး အခကြေးငွေမယူပဲ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အထွေထွေအသုံးချမှုအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ မည်သည့်အစိုးရတစ်ရပ် သို့မဟုတ် အစိုးရတွင်း အေဂျင်စီတစ်ရပ်မှ စီးပွါးဖြစ်လုပ်ဆောင်နေသော သုတသနဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် domain မဟုတ်ချေ။ ဤသည်မှာ အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သည့် အစိုးရမဟုတ်သော data/open ဗဟုသုတမီဒီယာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို ဂရုတစိုက် လေ့လာအတည်ပြုစစ်ဆေးပြီးမှသာ အများသူငါ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်တင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Open Development Myanmar အနေဖြင့် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို တတိယ ရင်းမြစ်များ၏ တိကျမှု၊ ပြီးပြည့်စုံမှု သို့မဟုတ် သင့်တင့်လျောက်ပတ်မှုတို့အတွက် အာမ မခံပါ။ ဤနေရာတွင်ရှိနေသော သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ပေးထားသော အချက်အလက်များ၊ materials သို့မဟုတ် စာတမ်းများကို ဖော်ပြမှု သို့မဟုတ် အသုံးချမှုတို့အတွက် အချက်အလက်အားဖြင့် သို့မဟုတ် ဥပဒေအားဖြင့် တိကျမှု၊ ပြီးပြည့်စုံမှု သို့မဟုတ် သင့်တင့်လျောက်ပတ်မှုတို့ကို Open Development Myanmar မှ ကိုယ်စားမပြုပါ သို့မဟုတ် အာမ မခံပါ။
Site ကိုအသုံးပြုသူများကိုလည်း ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို အထောက်အကူပြုရန်အတွက် သုတေသနများထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ သုတေသနများထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး ဤ site ၏ တိကျသေချာမှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည်။
Open Development Myanmar website သို့မဟုတ် database ကိုရယူခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဤ site မှထောက်ပံ့ထားသော သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် တာဝန်ယူပြီး အသုံးပြုမှုကြောင့် တစ်ဦးချင်းစီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပုံစံနှင့် အကြောင်းအရာများဆုံးရှုံးမှု၊အန္တရာယ် ဖြစ်စေမှု သို့မဟုတ် ပျက်ဆီးစေမှုတို့မဖြစ်အောင် အသုံးပြုရမည်။
Do you have questions on the content published by Open Development Myanmar? We will gladly help you.
Have you foundatechnical problem or issue on the Open Development Myanmar website?
Do you haveanew idea that could help transform the Open Development Myanmar website? We will be glad to hear it.
Do you have resources that could help expand the Open Development Myanmar website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall underaCreative Commons license.
Disclaimer: Open Development Myanmar will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.